Jupiter kwiCapricorn - Jupiter Signs
I-Jupiter Capricorn ngumveli wendabuko ngendlela efanelekileyo yegama. Bathemba ikusasa kuba bayazi ukuba baya kuyilungisa.
Oku kunokubenza babonakale bekhuselekileyo, njengoko bathanda ukucwangcisa amanyathelo abo ngokucophelela. Bazigcina ixesha kunye neetalente zabo, ngenxa yento abayifunayo kakhulu ebomini.
Amandla abo kukukholo lwabo lokuba ngomsebenzi onzima nomonde, unokufikelela kwiinjongo zakho. Kwaye abayikuchitha ixesha kwiinjongo ezingenangqiqo okanye ezikhokelela ekuphumeleleni kwe-flash-in-pan.
Zivame ukufunyanwa kumagcisa athatha ixesha lokwakha kwaye abe neendawo kuluntu. Xa bebambelele kwimigangatho yabo ephakamileyo, bayaphumelela baze bafumane imivuzo kaJupiter.
Igama eliphambili leJupiter Capricorn lisebenza .
Ngaba lo nguphawu lwakho lweJupiter ? Fumana uphawu lwakho kunye ne- chart generator.
Ukulandela uphawu lweJupiter's Own Own
Kwi-Sagittarius, i- Jupiter ithatha inqwaba yokholo ukuba yandise i-horizons kwaye ifune iinjongo ezikhutheleyo, ezenzekayo. Ukunyuka kweJupiter kulo mqondiso weKhadi lomhlaba kubonisa ukuba 'ukuwa' kweplanethi yeenkwenkwezi zeenkwenkwezi zakudala, oko kuthetha ukuba kulungelelanisa.
I-Jupiter ngokuphathelele uvuyo, inhlanhla kunye nendlela yokwandisa. KuCapricorn, i-Jupiter i-sobers up kwaye ikhula ngokukhawuleza, kwaye ukukhula kuvela kwizicwangciso ezicatshulwa kakuhle, kunokuba zifuneke ngokukhawuleza.
Kodwa iJupiter Capricorn inethemba elithe cwaka lokuba abanye bacinga ukuba bayathembeka. Esikhundleni seqhenqa elingenangqondo, wenza amanyathelo okucinga ukuba enze amaphupha ayenokwenene.
Le ntlupheko isishukumisela ukuba senze ifa elihlala njalo kwimibono yethu. Ixhasa ukwakha izakhiwo ezihlala zihlala zihlala zivela kwimimodeli ekhona kwimbali okanye kumava. Jupiter eCapricorn uthi 'ndibonise imali,' ngaphambi kokuya kwisikimu. Le Jupiter igxininisa kumanyathelo okukhokelela kwisiphumo sokugqibela esiyimpumelelo.
Ngale ndlela, yindlela ehamba phambili ekhuthaza ukunyanzeliswa kwemali, kunye nokufuna ukuzinza kwiindlela eziqinisekisiweyo.
I-Jupiter isalathisi ngumhlaba kwiCapricorn, kwaye kukho isiza ukuqinisa ngaphakathi, kunye ngaphandle. Umqondiso weMhlaba Jupiter umbane, udweba oko ufuna, kwaye uqhubeke uhlakulela ukusuka kwisiseko sekhaya.
Ukwenza Into Yokuba Ufundayo
I-Jupiter kwiCapricorn ivuselela iinjongo zokudala izakhiwo ezibonakalayo. Kuhamba ukufumana iingcambu ezinzulu emhlabeni wonke ulwazi, amava kunye nobulumko bokomoya obufike kwiSagittarius.
Le Jupiter ifumana ukholo ngokulawula kwayo inqwelo-moya yendalo-yenyama. Yindlela ehamba ngayo eboleka iimpawu zomonde, ukuqeqesha, ukunyamezela nokuzithemba ngamandla okwenene ukudala. KwiCapricorn, i-Jupiter inokuqinisekiswa okupholileyo okugcina amandla ayo agcinwe kwiinjongo ezifanelekileyo. Kulixesha apho amaphupha amakhulu angabekwa kwifom, kwaye anikwe ithuba lokuhamba ngokukhawuleza.
I-Capricorn igunya kunye notitshala. Kuthunyelwe nguSaturn , ngumqondiso owaziyo umda, onokubambisa ubunzulu ekujoliswe kuwo. Ibhokhwe ifuna ukujongana nehlabathi lokwenene, kwaye inzima ukunyuka kwiintaba ezintle zobomi. KwiCapricorn, ukupha kukaJupiter kuvela kwizifundo zayo zokuzithemba.
Le Jupiter ikhuthaza ukudala izakhiwo ezingagcinwa, kwaye zenze uluntu luzimeleyo. Idibanisa kwizinto ezisebenzelweyo kwixesha elidlulileyo ukudala oko kuza kusebenza ngekamva.
I-Jupiter eCapricorn isikhuthaza ukuba sizinikele kwimibono yethu, kwaye siyenze ibe yinyani. Isisindo sayo esinzima sisinokuba nempembelelo enamandla, njengepakethe enkulu kwimbuyiselo ka -herpa. Isigcina sigxininise kwisinyathelo ngasinye, endleleni ende ekugqityweni.
Nantoni na into efanelekileyo ithatha umgudu, kwaye le Jupiter ifuna ukuba sibe nefuthe lwaloo mpu melelo. Uhlobo olunzima. Ibhokhwe iyazi ukuba ngamanyathelo athatywayo, aya kuyenzela phezulu kwintaba ekugqibeleni.
Funda Iimpawu Zentetho ziLwimi
I-Microsoft Access Genealogy Database Template
Allosaurus vs Stegosaurus - Ngubani Owunikelayo?
I-albhamu e-Best-Selling Rock yama-1990
Indlela iBettery isebenza ngayo
Ukuhlahlela ngaphezu kwe-Snowboarding Jibs
Sombulula iMirhafti Iimpendulo zikwiphepha le-2 le-PDF
I-PBS - Ukuncedisa ukuKhathazeka kweZenzo, iindlela zokuQinisekisa ukuziphatha okuhle